Wifi password hack | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Wifi password hack
Posted by Bl4ck_B4dB0y on Sep 13, 2012 in Computers & Technology | 28 comments
ဒါကတော့ အွန်လိုင်းဝက်ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ ပြန့် နေတာပါ ကျနော်လည်း ကူးလာတယ် MHPGကနေ (MHPGကအကိုတွေရေ ညီ့ကိုခွေးလွှတ်နော် အဲလေခွင့်လွှတ်နော်) LOL
WIFI Password ခိုးနည်းလေး ကို ပေးလိုက်ပါ့မယ်.. ဆိုင်ပိုင်ရှင်တော့ မသိစေနဲ့နော်..တော်ကြာ ကျွန်တော့်လာဟက်နေမှ …..ဒုက္ခ…:D
ဥပမာ …..(069500) လိုမျိုးပေါ်နေတာကိုပြောတာပါ။( ဒီ ဂဏန်းလေးတွေက ဥပမာပေးတာပါ။ ကိုယ့်စက်မှာပေါ်တာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဂဏန်းနောက်
ခနစောင့်…. Connection နေရာမှာ Connected ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။။။
Myint Myat Thu has written5post in this Website..
View all posts by Bl4ck_B4dB0y →
ဂေဇက်ဂို သူများဒေလာဟတ်ရင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယဲချိုဒါ
အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကာကွယ်နည်းကတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ပြီးတော့ အပေါက်ရှာနေတာအကောင်းဆုံးပဲ အဲဒါဆို တော်ရုံလူ မဟက်နိုင်လောက်ဘူး (အနော်လည်း သိတာမဟုတ်ဘူးရယ် လျှောက်ပြောတာ) ကိုယ့်မှာ ဆိုဒ်တခုတောင်မရှိဘဲနဲ့ သူများကို ဆရာသွားလုပ်တယ်ေိေိ
ကျော် လုပ်လိုက်တာ ပတ်ဝတ်ပဲတန်းပေါ်လာတာ……
အဲဒီလောက်နဲ့တော့ ၀ိုင်ဖိုင် ခိုးသုံးလို့ မရလောက်သေးပါဘူးညီ …
၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်နေသူ မှော်ဆရာ ..
LOL ဒါတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူး ကျနော်က လူပိန်းဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းကို လိုက်မမှီဘူးခင်ဗျ ဒါကြောင့်မသိတာခင်ဗျ ဒါပေမယ့် ၀ိုင်ဖိုင်ကို ဟက်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲဆိုလား ဘာဆိုလား ပေါ်နေတယ် ဆိုလားဘဲဗျ
ဟက်ချင်းဟက် ယိုးဒယားက ဟက်ကာချာတိတ်လေးလို
ဒီက ခရိုနီကြီးတွေ ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ထဲက အစွန်းအထွက်လေးတွေ ကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲ ထိုင်လွှဲချင်စမ်းပါရဲ့ 
လက်တွေ့ လုပ်နိုင်တဲ့အထိ သင်ပေးမယ့်လူရှိရင် ၊ ကျုပ်မောင်ပေ မှ သေပြီးသည့်အထိ ဆရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးသိပါမည် ။
လူပြိန်းများ နားလည်အောင် ဗရမာ လိုလေး လဲ ရှင်းပြပေးပါဦး ………B0y ရယ် …
စလုံးရေ စတောင် မလုပ်တတ်သေး. ဘူး ဟ ….။
၀ိုင်ဖိုင်ကို ဓမြတိုက်စား = Wifi Hacking လုပ်ပြီး သုံးရတာထက်
၀ိုင်ဖိုင်ကို ခိုးစား = Wifi Piggybacking လုပ်ပြီး သုံးရတာကို ပိုပြီး အရသာရှိတယ် ။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒါကို ကြောက်တာ ..
သု့ မိန်းမဂျီး တွားဟက်..
10 September 2012 0024hrs ညကတော့ MG hack ခံလိုက်ရတာပဲ။ post တင်တာကို သူကြီးက တင်မပေးဘူး။
ဒီိနည်းကို အလျင်စမ်းကြည့်တုန်းက တချို့ WEP တွေမှာ ရဘူးတယ်.. WPA2 ကတော့ မလွယ်ဘူး.. ဒီ မလေးရှားမှာဆိုရင်တော့ P1 ရဲ့ အမျိုးအစားဟာ WEP ပါ.. Wreless Hacking လုပ်တဲ့ အခါမှာ WEP က အလွယ်ဆုံးပါဘဲ.. ကျနော် စမ်းကြည့်တာ အလွန်ဆုံးဟက်ရ မိနစ်နှစ်ဆယ်ပါဘဲ.. ဒီအခွေက Linux ကိုအခြေခံထားပြီး နို့ ဗူးပုံစံအိုင်ကွန်လေးနဲ့ ပါ.. WPA2 ကို တခြားအခွေနဲ့ ဟက်တာတော့ တစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်..
လောလောဆယ်တော့.. ဆိုဒ်ကို DDos တိုက်နေပြန်ပြီ ကိုရင်ဘလက်တို့ ရေ့..
50.63.132.125:http -> 131.253.46.116:55751 ESTABLISHED
50.63.132.125:http -> 115.67.193.58:61191 ESTABLISHED
ကျနော်တို့ တွေမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သတင်းမရသေးတဲ့ ညီအကိုတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး ကျနော်တို့ က တိုက်မယ့်ဟာကို target ချပေးတဲ့ အကိုတွေ ချပေးမှ တိုက်တာပါ မဟုတ်ရင် မတိုက်ပါဘူး ဒါကတော့ ကျနော်တို့ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးနော် ကို Kai
သဂျီး အဲဒါ ကျုပ်မဟုတ်ဘူး မယုံရင် ဘလွတ်ဘလက်ဘိုင် ကိုမေးကြည့်
သူကြီးရေ…တောင့်ထားဗျ…။ Thanks ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
သူများလာတိုက်ရင် ဂဇက်ဘက်မှာ နေပါဟယ်။
မင်း အစ်ကို များကိုလဲ အသေအချာ ရှင်းပြပါ။
တို့ရွာ မလဲ ဘက်စုံရန်သူတွေ ဝိုင်းနေပြီ ထင်ရဲ့။
အခု မင်းတွေ့ပြီ မဟုတ်လား။
အရီး တို့ ပြောနေတာတွေက ဘာကို၊ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲ နေနေတာ ဆိုတာ။
အမာခံ ရွာသား အဖြစ် ရပ်ပြီး စောင့်ကြည့် နေလို့ ကတော့ လက်ဖက်ရည်ပွဲတောင် ပြင်ပေးပါတယ်။
ဘာမှန်းမသိဘဲ အရမ်းခံရရင်သာ စိတ်တိုစရာကောင်းတာ။
တို့တွေ စိတ်မတို သင့်ပေဘူးလား။
မင်းတို့ ဆိုလဲ ဖြောင့်မတ်တဲ့ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ မတရားမှု ကို မြင်ရင် မကြိုက်ဘူး မဟုတ်လား။
DDos က.. ယူအက်စ် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရုံးထဲက စတက်တစ်အိုင်ပီကြိးနဲ့.. ကွန်ပျူတာကလာနေတာ..
ပို့စ်တင်ရတာ.. အရမ်းခက်ကြောင်း… :?
သူကြီးရေ ရွာမှာကနားပွဲပေးမှထင်တယ် ရွာသူနှောင့်ယှက်နေပြီထင်ပ
သဂျီး ရေ ကျွန်တော်တို့team ကမဟုတ်ပါဘူးဗျ ဒါပေမယ့် ip trace လိုက်လည်း အခုခေတ်ကြီးမှာ ip hider တွေ အမျိုးစုံ ရှိနေတာမို့ လို့ သိဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူးဗျ
SSID သည် ဂဏန်းမဟုတ်ပါ …နောက်ပြီး Encrypting စနစ်တွေကြားထဲမှာ Hash ပေါင်းများစွာပြောင်းပြီးမှ လျှို့ဝှက် ကုဒ်ကိုရတာပါ ..
၀ိုင်ဖိုင် ဟက်ချင်တဲ့လူ ရှိရင်လက်ညိုးထောင် .. နည်းပေးမယ် ဟဲဟဲ
Wifi ဟက်တဲ့ အကြောင်း
မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ အီးဘုတ်ခ်တော့ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ ..
အဲ့ဒီထဲမှာတော့ VMWare နဲ့ ဘက်စရက် ကို သုံးပြီး ဟက်သွားတဲ့ ပုံစံကို ပြထားပါတယ် ..
ဝိုင်ဖိုင်ထဲမှာ WEP က ဟက်လို့ အလွယ်ဆုံးဆိုပဲ
စာအုပ်ထဲ ရေးထားတာ ပြောတာနော်၊ ကျုပ်ကတော့ ဘာမှ သိဝူးရယ် ..
Back Track တင်ပြီးတော့ ဝိုင်ဖိုင် ခရက် လုပ်တာ စမ်းဘူးသဗျ…
WEP တော့ ရတယ်..။ WPA ,WPA2 လည်း ရကောင်း ရနိုင်ပါလိမ့်
မယ်..။စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ရမလားပဲ။ ဘက်ခ် ထရက်ခ် မှာ
အိပ်ပလွိုက်တေးရှင်း တူးလ် တွေက အများသားကပဲ။
WEP တစ်ခုဘဲရတယ် … Sniffing resent packages ထဲမှာ Hash အနေနဲ့ pass code ပါလာလို့ ..
WPA ,WPA2 ကမရဘူး … Brute Forcing တစ်နည်းဘဲရှိတယ် …. wordlist.lst နဲ့ darkc0de.lst ထဲမှာ password မပါဘူးဆိုရင်ကော ???? ဥပမာ – mgmgOo ဆိုပြီးမြန်မာနာမည်နဲ့ပေးထားရင် darkc0de.lst ထဲမှာဘယ်လိုရှာမလဲ ???? back track အကြောင်းသိချင်ရင် http://www.backtrack-myanmar.co.cc မှာ ရေးပေးထားတယ် ..
ရှေကနောင်ကြီးတွေ ပြောနေကြတဲ့ Wifi Hack တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျနော်သိပ်ပြီးနားမလည်ပါဘူး။
ကျနော် သိထားတဲ့နည်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ မြန်မာ GSM , CDMA ဖုန်းများ Free ပြောလို့ရတဲ့နည်းကိုတော့ ကျနော် အမှတ်မထင်တွေ့ ထားတယ်ဗျ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု အကြိမ်ရေ ၁၀၀ ခန့် မိနစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်လောက်တော့ လုံးဝ Free ရတာအောင်မြင်ထားပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါ လူတိုင်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အခု ကျနော်ရေးထားတဲ့ Comment ရဲ့အောက်မှာ တောင်းဆိုသူ ၁၀ ဦးထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါက မြန်မာ GSM , CDMA ၅ သိန်းတန်များ၊ ၂ သိန်းတန်များ Free ပြောလို့ရတဲ့နည်းကို
ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဆင်းကဒ်အားလုံးအတွက် နည်းလမ်းကတော့တစ်မျိုးထဲပါ။ အသုံးပြု့ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့ ကိုယ်အသုံးပြု့ချင်တဲ့ဖုန်းထဲမှာ ပိုက်ဆံကတော့ရှိနေရပါမယ် . . . . .
အမှတ်မထင်တွေ့ရှိထားမှုကို အခုတစ်ခါတည်းဖော်ပြမပေးတာကို နားလည်ပေးစေလိုပါတယ် . . . . .
သိရင်လဲ တစ်ခါတည်း ပြောလိုက်ပါလားအေ ညည်းကလဲ …
ဒါက ရေးတော့သာလွယ်တာ ပေးထားတဲ့ Setting ပေါ်လည်း မူတည်ပြီး ကွာခြားမှုရှိတာလေးပါ ထည့်ပြောသင့်ပါတယ်။ WEP ဆိုရင်လွယ်သလို WPA ဆို ခက်တယ်ဆိုတာလည်း ရှင်းပြပါဦး။